बैङ्क डकैतीको कथा | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बैङ्क डकैतीको कथा
बैङ्क डकैतीको कथा
नस्सिम निकोलस मार्क स्पिज्नागेल
अमेरिकी अर्थतन्त्रलगायत अन्य धेरैजसो विकसित अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो कोठाभित्र छिरेको हात्ती पनि नदेखेझैं गरिरहेका छन् । यस्तो देखेर पनि नदेखेझैं गरिएको ठूलो समस्या हो- बैङ्करहरूलाई विगत ५ वर्षभित्र तिरिएको ठूलो रकम । अमेरिकामा त्यस्तो रकमको कुल परिमाण २२ खर्ब डलर पुगेको छ । आगामी दशकभित्र त्यस्तो रकम ५० खर्ब डलरको हाराहारीमा हुनेछ । यो रकम राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासन र विपक्षी रिपब्लिकनबीच सहमति भएअनुसार सरकारी बजेट कटौती गरिने रकमभन्दा निकै ठूलो हो ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट यसरी ५० खर्ब डलरको विशाल रकम सडक, स्कूल र अन्य दीर्घकालीन परियोजनाको निर्माणमा नगई सीधै बैङ्क कार्यकारी र कर्मचारीका व्यक्तिगत खातामा सारिनेछ । त्यति ठूलो मात्राको रकम बाँकी जनतामाथि ठूलो धुर्ततापूर्ण तरीकाले कर लगाएर उठाइएको हो भन्न सकिन्छ । यो निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि हालको वित्तीय र आर्थिक समस्या निम्त्याउन मद्दत पुर्‍याउने बैङ्करहरूले त्यसबाट उत्पन्न कुनै दु:ख भोग्नुपरेको छैन, बरू धेरैजसो अवस्थामा त वास्तवमा उनीहरूले फाइदा पो उठाइरहेका छन् ।
मूलधारका मेगा बैङ्कहरू धेरै दृष्टिकोणले तिलस्मी पहेलीजस्ता देखिन्छन् । तैपनि अब यो कुरा गोप्य रहेन कि ती बैङ्कहरू हालसम्म एउटा विशिष्ट क्षतिपूर्ति योजनाका रूपमा सञ्चालन भएका रहेछन् । न्यूनजोखिम र उच्च असरका अनपेक्षित घटनाहरूको सम्भाव्यतालाई यस्ता योजनाले ढाकछोप गरेको हुँदोरहेछ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ती बैङ्कलाई दिइएको अन्तरनिहित प्रत्याभूतिबाट ती बैङ्कले नि:शुल्क फाइदा उठाइरहेका रहेछन् । तिनका मुनाफाको स्रोत शीप नभएर अत्यधिक ‘लिभरेज’ (ऋण) रहेछ । र, त्यही नाफा पछि कर्मचारीहरूको बीचमा असमानुपातिक रूपमा प्रवाह हुँदोरहेछ । ती बैङ्कले कहिलेकाहीँ बेहोर्ने गरेको विशाल घाटाको स्रोत पनि त्यही हो र यस्तो घाटा भने शेयरहोल्डर र करदाताले वहन गर्नुपर्दोरहेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, बैङ्कहरूले जोखिम लिन्छन् र स्थिति सकारात्मक भए त्यसबाट फाइदा लिन्छन् तथा अप्ठयारा जति शेयरहोल्डर, करदाता, र यतिसम्म कि सेवानिवृत्तहरूसमेतका टाउकामा थोपरिदिन्छन् । बैङकिङ प्रणालीलाई उद्धार गर्न केन्द्रीय बैङ्क फेडरल रिजर्भले ब्याजदरलाई कृत्रिम रूपले न्यून राखिदियो । हालै पत्ता लागेअनुसार उसले बैङ्कहरूलाई १२ खर्ब डलरको गोप्य ऋण पनि दिएको थियो । हालसम्म देखिएको त्यसको प्रमुख प्रभाव के हो भने बैङ्करहरूलाई ऋणीहरू आकर्षित गर्नुको साटो जोखिम लुकाएर बोनस सृजना गर्न सजिलो भएको छ ।
त्यस्ता जोखिमको भार करदाता, सेवानिवृत्त र आफ्नो बचतको प्रतिफलमा भर परेका अन्य व्यक्तिहरूले वहन गर्छन् । साथै, न्यून ब्याजदरको नीतिले मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई सबै बचतकर्ता र भविष्यको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छ । तैपनि गतवर्षबैङ्करहरूलाई दिइएको तलब तथा सुविधा सङ्कटपूर्वकै अवस्थामा पुगेको थियो । करदाताको यसभन्दा ठूलो अपमान हुन सक्दैन ।
वास्तवमा, सरकारले ऋणमोचन गर्नुभन्दा पहिला बैङ्कहरूले कहिल्यै पनि कुनै प्रतिफल आर्जन गरेका थिएनन् । उनीहरूको सम्पत्तिको मूल्यलाई बजारमूल्यमा देखाएर मात्र प्रतिफल कमाएजस्तो देखिएको हो । तिनले दीर्घकालमा पनि कुनै प्रतिफल दिन सक्ने छैनन् । किनभने तिनको व्यावसायिक मोडेल त्यस्तै छ, जस्तो पहिला थियो । मात्र तिनका व्यापारिक जोखिममा केही शृङ्गारिक परिवर्तन गरिएका छन् ।
अर्थात्, तथ्यहरू स्पष्ट छन् । तर, व्यक्तिगत करदाताका रूपमा हामी असहाय छौं । लबी गर्नेहरू र आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले गरेको सुनियोजित तथा निरन्तर प्रयासले परिणाममाथि उनीहरूकै नियन्त्रण हुन्छ । अनिच्छापूर्वक भए तापनि बैङ्क अधिकारी र कार्यकारीहरूलाई थप तलब सुविधा दिन हामी बाध्य पारिन्छौं । तर, पहेलीमा त्योभन्दा पनि ठूलो हात्ती छ । उदाहरणका लागि आम्दानीको ठूलो हिस्सा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने बैङ्कको शेयर लगानी व्यवस्थापक कम्पनीले किन गरेको होला त ?
विगतमा हासिल भएकोजस्तै प्रतिफल फेरि कमाउन त्यसो गरेको भन्ने तर्क त्यति उपयुक्त छैन किनभने विगतको त्यस्ता प्रतिफल अपर्याप्त थियो । वास्तवमा अपेक्षित प्रतिफलको आधारमा शेयरहरूलाई छुट्टयाइएको भए वित्तीय क्षेत्रको लगानीमा विगत २० वर्षदेखिका जोखिमलाई आधाभन्दा बढीले घटाउन सकिन्थ्यो ।
पोर्टफोलियो र पेन्सन फण्ड म्यानेजरहरू लगानीकर्ताबाट दण्डित हुनु नपर्ने अपेक्षा किन गर्छन् ? आफ्ना ग्राहकका रकमलाई स्वेच्छापूर्वक नै बैङ्करहरूको गोजीमा पुर्‍याइरहेको कुरा के लगानीकर्ताहरूलाई थाहा छैन र ? के कोष व्यवस्थापकहरूले विश्वासको जिम्मेवारी र नैतिक नियम दुवैको उल्लङ्घन गरिरहेका छैनन र ? बैङ्कहरूलाई अनुशासित बनाएर तिनलाई जिम्मेवारीपूर्ण जोखिम वहनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न बाँकी रहेको एक मात्र मौका लगानीकर्ताहरूले गुमाइरहेका पो छन् कि ?
बजारको प्रक्रियाले त्यस्ता प्रश्नको निराकरण किन गर्न सक्दैन बुझ्न गाह्रो छ । राम्रो सञ्चालनमा रहेको बजारले त्यस्ता अवस्थाको सृजना गर्छन्, जसमा सही पर्फेन्स गर्ने, उपयुक्त तलबभत्ता भएको, उपयुक्त जोखिम साझेदारी भएको र अन्तत: उपयुक्त संस्थागत सुशासन भएको बैङ्कहरूलाई मात्र प्रोत्साहन गर्छन् ।
यदि बैङ्करहरूले जोखिमलाई बा⋲यकरण गरेर करदातामा हस्तान्तरण गरेर कमाएजस्तो उच्च प्रतिफल लगानी व्यवस्थापक र तिनका ग्राहकले बैङ्कको शेयर किनेर पाउँदैनन् भने किन उनीहरू त्यस्तो शेयर किन्छन् त ? त्यसको जवाफ तथाकथित ‘बिटा’ हो: एस एण्ड पी-५०० को अधिकांश हिस्सामा बैङ्कहरू छन् र तिनको शेयरमा यस्ता व्यवस्थापकहरूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थाको रामवाण उपचार नियमनबाट हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन् । ठूला र जटिल प्रणाली भएका बैङ्कहरू नियामकहरूभन्दा एक कदम अगाडि रहन कुशल भइसकेका छन् । लगातार जटिल वित्तीय प्रडक्ट र डेरिभेटिभ्सको सृजना गरेर उनीहरू नियम छल्न सफल भएका छन् । यस्तो अवस्थामा थप जटिल नियम बनाउनुको अर्थ वकिलहरूलाई तिर्नुपर्ने थप रकम, पक्ष फेरिरहने नियामकहरूका लागि थप आम्दानी र डेरिभेटिभ्स व्यापारीका लागि थप नाफा मात्र हुनेछ ।
बैङ्किङ प्रणालीलाई अनुशासित बनाउनेतर्फभूमिका खेल्ने लगानी व्यवस्थापकहरूको नैतिक र व्यावसायिक दायित्व छ । उनीहरूको पहिलो कदम भनेको बैङ्कहरूलाई तिनले दिने तलबसुविधाको आधारमा छुट्टयाउनु हो ।
सुर्ती कम्पनी र दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीजस्ता मुद्दामा बाहेक लगानीकर्ताहरूले विगतमा नैतिक मान्यतालाई राम्रै अनुसरण गरेका थिए । र, शेयरमूल्यमाथि दबाब बढाउन उनीहरू सफल पनि देखिएका थिएनन् । बैङ्कमा लगानी गर्नु भनेको नैतिक र व्यावसायिक दुवै मान्यताको दोहोरो उल्लङ्घनको अवस्था हुन पुगेको छ । यस्तो रकम बढी उत्पादनमूलक कम्पनीतर्फप्रवाहित हुन सके लगानीकर्ता तथा हामी सबैलाई नै राम्रो हुने थियो । शायद त्यतिखेर हाल बैङ्करहरूलाई दिइने बोनस रकम व्यवस्थित चन्दाकोषलाई दिन सकिन्थ्यो ।
नस्सिम निकोलस तलेब न्यूयोर्क युनिभसिटीमा रिस्क इञ्जिनीयरिङका प्राध्यापक तथा ‘द ब्ल्याक स्वान’का लेखक हुन् । मार्क स्पिज्नागेल हेज फण्ड म्यानेजर हुन् ।
साभार: प्रोजेक्ट सिण्डिकेट